Volana famafazana lunar | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Volana famafazana lunar
Lisitry ny asa ao an-jaridaina sy ny zaridaina, kalandrie famafazana volana ho an'ny Desambra 2017
Amin'ny ririnina, ny vanim-potoana fitsaharana sy torimaso dia manomboka amin'ny trano fahavaratra mandritra ny fahavaratra. Tsy midika izany fa tsy misy asa ho anao. Ilaina ny manara-maso ny zavamaniry amin'ny ririnina, manarona azy amin'ny lanezy, miaro azy ireo amin'ny bibikely. Misy asa ao amina trano fisotroana, zaridaina, misy zavamaniry any anaty trano. Mpamboly mpikarakara ny zaridaina, zaridaina sy zaridaina, inona no tokony hatao any am-piandohan'ny volana Desambra Tany am-piandohan'ny volana Desambra, nanaraka ilay mpamboly kalandrien-joma tamin'ny Desambra 2017, mandehandeha manodidina ny zaridaina, manararaotra ny lanezy eo akaikin'ny tranon'ilay tranonkala:
Lanonana famakiana volana famaranana ho an'ny Febroary 2019
Ny fisafidianana ny fotoana ho an'ny fambolena, ny fanodinkodinana, ny fitrandrahana ary ny fambolena zaridaina sy ny fambolena, dia matetika ny mpikaroka dia mifantoka amin'ny alimandrin'ny volana. Ny vanim-potoan'ny volana dia misy fiantraikany amin'ny fomba famerenan'ny orinasa amin'ny fidirana ivelany amin'ny fomba iray. Amin'ny mpamboly kalandrie febroary amin'ny volana febroary ary andro tsara ho an'ny asa fambolena - vakio etsy ambany.
Mpanao zaridaina zaridaina sy zaridaina am-perinasa amin'ny 2019 ho an'ny Urals
Hatramin'ny andro fahiny, ny olombelona dia nampiasa ny fihetsik'ireo vatana selestialy mba hanamarihana ireo hevi-dehibe ho an'ny fambolena: ny fambolena sy ny fotoam-pijinjana. Ny lahatsoratra dia mifantoka amin'ny endriky ny kalandrie momba ny florist sy ny zaridainan'i Urals tamin'ny taona 2019. Inona no fiantraikan'ny foto-tsakafon'ny volana eo amin'ny fitomboan'ny zavamaniry Ny zavamaniry dia mihoatra ny 80% ny rano, ka ny fiheveran'ny volana dia misy vokany manan-danja amin'izy ireo, ary koa amin'ny rano anaty rano.
Kalandrieran'ny volana Jolay, 2019
Ny fiantraikan'ny lozam-pahefana amin'ny ety an-tany dia efa nopihan'ireo mpahay siansa hatry ny ela, noho izany dia tsy mahagaga raha mihaino ny hevitr'ireo mpanandro amin'ny fambolena vary samihafa ny mpikaroka maro. Amin'ny volana isam-bolana, ity dingana ity dia hanana toetra manokana, izay midika fa ny tolo-kevitr'ireo kalandrie astrolojika dia tokony hohadinoina mandritra ny taona.
Kalandrieran'ny volana febroary 2019
Saintpaulia dia zavamaniry mitaky mangataka - ny fotoana voafetra tsy voafaritra amin'ny fambolena dia afaka manimba ny kolontsaina. Ny kalandrie an'arivony dia manampy amin'ny fifidianana ireo andro tsara indrindra ho an'ny fambolena sy famolavolana voninkazo an-trano. Rahoviana ny fanatanterahana ny fanodikodinana amin'ny 2019 dia vakio etsy ambany. Ahoana ny fiantraikan'ny zavamaniry amin'ny vanim-potoan'ny volana?
Kalandrie masoandro amin'ny volana novambra 2019
Momba ny fiantraikan'ny Moon eo amin'ny dingana biôlôjika natao teto an-tany, efa fantatry ny olona hatramin'izay, ary ireo razambentsika, izay tsy nahatakatra tanteraka ny antony fototr'ity tranga ity, dia nianatra nampiasa izany ho tombontsoany, ka tafiditra ao anatin'izany ny fitarihana asa isan-karazany momba ny fambolena. Ireo kalandrana alimo natao ho an'ity tanjona ity dia mety ho ilaina ihany koa ho an'ny mpamboly na ny mpivarotra am-bolana, fa koa ho an'ny mpivady indostrialy.
Kalandrieran'ny volana Jolay amin'ny famolavolana tomaty
Ny tantsaha sasany amin'ny famafy voatabia ho an'ny zana-ketsa dia mifantoka amin'ny fotoana voatondro ataon'ny mpamorona sy ny toerana misy ny volana amin'izao andro izao. Ny mpahay siansa dia manamafy ny fiantraikan'ny satelita eto an-tany amin'ny zavamananaina iainana, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny zavamaniry - noho izany, ity fomba ity dia azo antoka tanteraka. Ny daty tsara indrindra ho an'ny fambolena voatabiha amin'ny 2019 arakaraka ny kalandrie isaky ny lohahevitra dia hodinihana bebe kokoa ao amin'ny lahatsoratra.
Fambolena zana-ketsa eo amin'ny kalandrana amin'ny volana 2019
Tsikaritry ny razambentsika koa fa misy fiantraikany amin'ny fambolena zaridaina ny vatan'ny any an-danitra. Noho izany dia teraka ny kalandrie ala, izay zakan'ny mpamboly maoderina maro ankehitriny rehefa mamboly zavamaniry. Avy amin'ity lahatsoratra ity no hianaranao momba ny fiparitahan'ny dipoavatra amin'ny alim-bolana amin'ny 2019. Fomban'ny fambolena dipoavatra ho an'ny zana-ketsa amin'ny alim-bolana amin'ny volana martsa amin'ny 2019. Amin'ny ankapobeny, ny fambolena dipoavatra ho an'ny zana-ketsa dia mitranga amin'ny 15 febroary ka hatramin'ny 10 martsa.
Lanonana famafazana masoandro amin'ny volana Janoary 2019
Ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny fikarakarana azy ireo araka ny kalandrie isak'alina dia antsoina hoe fambolena biodynamic, izay mandinika ny fitaratry ny latabatra momba ny fitomboan'ny zavamaniry. Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny kalandrie amin'ny volana Janoary 2019 - mamaritra ny andro tsara sy mendrika hambolena, ary daty voatendry hanatanterahana asa ho azy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Volana famafazana lunar